विजय शमशेर Info. About. What's This?
ⓘ विजय शमशेर
लेफ्टिनेन्ट जनरल विजय शमशेर प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर कार्यकालमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको अड्डाका हाकिम थिए। उनी मुन्शी खानाको डाइरेक्टर जनरल थिए।
उनले पद्म शम्शेरद्वारा बहादुर शमशेरको अध्यक्षता गठित संवैधानिक सुधार समितिको सदस्य भएर समेत काम गरेका थिए। उनले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउन ठूलो प्रयास गरेका थिए तर सोभियत रुसको भिटोको कारण नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जोडिन सकेन।
उनी राणाहरूमा पढेलेखेका मध्ये थिए। उनले कलकत्तामा बसेर राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका थिए। उनको वरिपरि त्यो समयका सक्षम र विद्धान सहयोगी थिए। सरदार भीमबहादुर पाँडे, सरदार गुञ्जमान सिंह र नरेन्द्रमणि आचार्य सहितको उनको बलियो टोलि थियो ।
1. भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि,१९५०
विजय शमशेरले सम्बन्ध बढाएर १९५० को सन्धिको नेगोसिएसन भारतीय सत्ता पक्षसँग गरेका थिए। नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई थाहै नदिई विजय शमशेरले नेहरूसँगको आफ्नो पुरानो सम्पर्क र चिनजान प्रयोग गरी २००६ साल फागुनमा दिल्लीमा नेहरू र मोहन शमशेरबीच गराए। उनीहरूबीच सन्धिका बारेमा ९० मिनेट कुरा भयो। भारतले सन्धिको मस्यौदा तयार गरेको थियो तर नेपालमा छलफल नगरी सही नगर्ने अडान लिएर मोहन शमशेर नेपाल फर्केको सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
२००७ साल पछि विजय शमशेर दिल्लीमा राजदूत भएर गए । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सन् १९५१ मा बबर शम्शेरलाई मन्त्रीबाट हटाएर त्यस ठाउँमा राख्नका लागि सिंह शम्शेरलाई भारतबाट फिर्ता बोलाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरले आफ्ना छोरा विजय शम्शेरलाई भारतको दोस्रो राजदूत बनाएर पठाएका थिए । उनी पनि त्यतिबेला विदेश मामिला नै हेर्दथे ।
विजय शमशेरको २९ डिसेम्बर १९५३ मा दिल्ली निवासमा नुहाउने इलेक्टि्रक गिजरमा विद्युत् प्रवाह हुँदा करेन्ट लागि निधन भएकाले विजय शमशेरले आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न पाएनन्।
Wikipedia: विजय शमशेर